Aung's Investment: STOP!
Posted by Aung Myo Htet at 11/09/2009 04:26:00 PM
Money Minded November 12, 2009 1:25 AM
ကျေးဇူးပဲ Bro!. Stop-loss သတ်မှတ်ချက်တွေကို စိတ်ဝင်တစားမှတ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် နည်းတွေကိုလည်း ဆက်ပါအုံး။ Thanks for your sharing.